Counter Strike 1.6 | ကို download လုပ်ပါ Counter-Strike 1.6 website ကို download လုပ်ပါ
Counter-Strike 1.6 အခမဲ့ဒေါင်းလုပ်:
Counter-Strike ၁.၆ အစိမ်းရောင်သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်လူကြိုက်အများဆုံး၊ ဖျော်ဖြေမှုနှင့်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲယူနိုင်သောကျယ်ပြန့်စွာကူးယူနိုင်သည့်ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်၊ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်စွန့်စားခန်းများနှင့်လှုပ်ရှားမှုများနှင့်ပြည့်နှက်နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ CS 1.6 ကိုသူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးစစ်ပွဲဆင်နွှဲရန်ဂိမ်းကိုနှစ်သက်သူတိုင်း၏အိပ်မက်ဖြစ်သည်။ CS 1.6 ကို download ပြုလုပ်ရန်မလိုလားအပ်သောဖိုင်မျိုးစုံမှ free သင့်လျော်သော ၀ ဘ်ဆိုဒ်သည်လွယ်ကူပြီးလွယ်ကူသောအလုပ်မဟုတ်ပါ။ သင်ဟာ Counter-Strike 1.6 လုပ်ဆောင်မှုဂိမ်းကိုစိတ်အားထက်သန်ပြီးအခမဲ့ download ကိုရှာနေလျှင်သင်နေရာမှန်၌ရှိနေသည်။ CS 1.6 အခမဲ့ download ရယူရန်ဒီနေရာကိုသွားရန်မလိုအပ်ပါ။ CS 1.6 ကိုအခမဲ့ဒေါင်းလုပ်ချရန်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းပါသည်။
ဒီ website တွင် Counter-Strike 1.6 ဗားရှင်းအားလုံးကိုအလွယ်တကူ download နိုင်သည်။ ဟုတ်တယ်၊ အခမဲ့တယ် သင်ပြုလုပ်ရန်မှာ CS 1.6 ဗားရှင်းအပြည့်ကိုတိုက်ရိုက်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ဖြစ်ပြီးအထက်ပါ download ခလုတ်ကိုနှိပ်ရုံသာဖြစ်သည်။ CS 1.6 setup သို့မဟုတ် multiplayer gameplay ကို ၀ ယ်ရန်ငွေမကုန်ဘဲဂိမ်းကိုပျော်မွေ့သည်။ ဖြစ်နိုင်ချေအရှိဆုံးမှာအခမဲ့ CS 1.6 downloads များကိုကမ်းလှမ်းသောဝက်ဘ်ဆိုက်များစွာကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်း၎င်းတို့အများစုသည်သင်၏ကွန်ပျူတာကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သော e-junk files များနှင့်အတူဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်နည်းလမ်းများရှိသည်။ ဤစာမျက်နှာတွင်သင့်အားမူလ CS CS 1.6 မူရင်းမိတ္တူနှင့်သင်၏ PC ထဲသို့လွယ်ကူစွာဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်တင်ပြသည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့မလိုအပ်သောဖိုင်များကိုဖယ်ရှားရန်နှင့်သင်၏ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်ဂိမ်းများကိုအကျိုးသက်ရောက်မည့်အပိုဖိုင်များနှင့်ပရိုဂရမ်များမရှိသောကြောင့်မလိုအပ်သောဖိုင်များကိုဖယ်ရှားရန် CS 1.6 အရွယ်ကိုကျွန်ုပ်တို့လျှော့ချခဲ့သည်။ CS 1.6 ကိုအခမဲ့ download ရယူရန်သာမကကစားသမားသစ်များနှင့် Counter-Strike 1.6 နှင့်ပတ်သက်သောဂိမ်းအတွက်အသစ်သောသူများအားလမ်းညွှန်မှုနှင့်သတင်းအချက်အလက်များကိုပေးအပ်ရန်သာမက၊ CS1.6 ကိုအလွယ်တကူ download လုပ်၍ ဂိမ်းကို PC သို့မည်သို့ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရမည်၊ မည်သို့တပ်ဆင်ရမည်၊ မည်သို့ CS ကစားရမည်ကိုလေ့လာနိုင်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့အတွက် csdownload.net ဝက်ဘ်စာမျက်နှာတစ်ခုကိုဖန်တီးထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အခမဲ့ဖြစ်ပြီးရေနွေးငွေ့မဟုတ်သောဗားရှင်း CS 1.6 ဒေါင်းလုပ်ကိုမြန်ဆန်စွာအမြန်ဆုံး download speeds၊ နောက်ဆုံးပေါ်ချုံ့ခြင်းနှင့်တပ်ဆင်ခြင်း algorithms ကိုကမ်းလှမ်းပါသည်။ CS XNUMX ရှိမူကွဲများနှင့်ဗားရှင်းများအားလုံးကို ၀ င်းဒိုးဗားရှင်းများ (XP, XNUMX, XNUMX, XNUMX and XNUMX) အတွက်အပြည့်အဝသက်တောင့်သက်သာရှိစေရန်နှင့်ဒီဝက်ဘ်စာမျက်နှာပေါ်ရှိအမှားအယွင်းများသို့မဟုတ်ဂိမ်းပြတ်တောက်မှုများမရှိဘဲဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ တပ်ဆင်နိုင်သည်။
၁.၆ Free Counter-Strike ကိုဘယ်လို download လုပ်မလဲ။
သင် Counter-Strike 1.6 ဂိမ်းများကိုအခမဲ့ download လုပ်လိုပါကသင်၏ကွန်ပျူတာသို့ CS 1.6 ကိုမည်သို့ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရမည်ကိုသင်မသိပါ။ ထို့ကြောင့်သင့်ကိုကူညီရန်ကျွန်ုပ်တို့ရောက်ရှိနေသောကြောင့်သင်စိတ်ပူစရာမလိုပေ။ CS 1.6 ဂိမ်း၏အခမဲ့ download ဗားရှင်းကိုသင့်အားကမ်းလှမ်းပါသည်။ သင်၏လုံခြုံစိတ်ချရသောဝက်ဘ်ဆိုက်မှသင် download ပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက်သင်ဤဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိအလုပ်လုပ်နိုင်သောရရှိနိုင်သည့် download link link CS 1.6 ကိုသင့်အားပေးထားသည်။ Load CS 1.6 ကို download လုပ်ရန်၊ လွယ်ကူလွယ်ကူသောအဆင့်အချို့ကိုသင်လိုက်နာရန်လိုအပ်သည်။ အခမဲ့ CS 1.6 ဒေါင်းလုပ်ချခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုနားလည်ရန်အောက်ပါညွှန်ကြားချက်များကိုသေချာဖတ်ပါ
အပေါ်ကပေးထားသော Counter-Strike 1.6 အခမဲ့ download ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ
ထို့နောက်သင်၏အခမဲ့ CS 1.6 setup ကိုသင်သိမ်းဆည်းလိုသည့်နေရာ၏နေရာကိုရွေးချယ်ပါ
၀ က်ဘ်ဆိုက်မှသင့်ကွန်ပျူတာသို့ CS XNUMX ကို download လုပ်ရန်မိနစ်အနည်းငယ်ကြာလိမ့်မည်။ Downloader မြန်နှုန်းသည်သင်၏အင်တာနက်အမြန်နှုန်းပေါ်တွင်မူတည်သည်။
CS 1.6 setup file ကို download လုပ်ပြီးသည်နှင့်သင် setup ဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားသော folder သို့သွားပါ
CS 1.6 ၏ setup ဖိုင်ကို နှိပ်၍ သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ထည့်ပါ။
သင်အခမဲ့ CS 1.6 ကိုအောင်မြင်စွာ download လုပ်ပြီးပြီ။ အခုဖွင့်ပြီးဂိမ်းကိုပျော်မွေ့ပါ။
အတိတ်ကာလကလူတို့သည်တန်ပြန်သပိတ်မှောက်မှုများအတွက်ငွေကိုပေးရသည်၊ သို့သော်ယခုတွင်၎င်းသည်ချွင်းချက်မရှိဒေါင်းလုပ် လုပ်၍ အခမဲ့ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့သည်အခမဲ့ CS 1.6 downloads ကိုဆက်ကပ်; သင်သည်ဤအံ့သြဖွယ်ပထမ ဦး ဆုံးသေနတ်သမားအမျိုးအစားဂိမ်း၏ဗားရှင်းနှင့်မူကွဲအားလုံးနီးပါးကိုအလွယ်တကူ download နိုင်သည်။ Counter-Strike 1.6 CSGO ဗားရှင်း၊ Counter-Strike: Halloween mode၊ CS 1.6 မူရင်းဗားရှင်း၊ CS 1.6: Process RAR ဗားရှင်း၊ CS 1.6: ETCS ဗားရှင်း၊ Counter-Strike 1.6 ခေတ်သစ်ပုံစံ (သို့) အခြားဗားရှင်းအပါအ ၀ င်ဗားရှင်းအမျိုးမျိုးကိုသင်ရှာဖွေနေတယ်ဆိုရင်၊ သို့မဟုတ်ဗားရှင်း၊ ၎င်းကိုဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်မှမည်သည့်အကန့်အသတ်နှင့်မျှအခက်အခဲမရှိကူးယူနိုင်သည်။ ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်တွင်၊ ဤဝက်ဘ်စာမျက်နှာပေါ်ရှိသင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ဂိမ်းတစ်ခုရယူရန်အတွက်သင်အခမဲ့ရယူလိုသောအခမဲ့ CS 1.6 download ခလုတ်၏မည်သည့်ဗားရှင်းကိုမဆိုနှိပ်ပါ။
CS 1.6 အတွက်အကောင်းဆုံး operating system ကိုအခမဲ့ download:
Counter-Strike မူကွဲအားလုံး (CS 1.6 Warzone, CS 1.6 Original, ETCS Final, CS: Geo Mode, Source Version စသည်တို့) Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows XP, Windows 10 စသည်တို့ကို Microsoft ဗားရှင်းအားလုံးနှင့်အတူတွက်ချက်နိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် Windows မှ လွဲ၍ အခြား operating system တစ်ခုကိုအသုံးပြုပါကဂိမ်းကိုပျော်မွေ့ရန်နှင့်ကစားနေစဉ်အမှားအယွင်းများမှတားဆီးရန်မိုက်ခရိုဆော့ဖ်ဝင်းကိုပြောင်းရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုသည်။ သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် Microsoft operating system ရှိပြီးသားဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏ website ရှိ Counter-Strike 1.6 အခမဲ့ download link button သို့သွားပြီးသင်၏ CS: 1.6 ကိုအခမဲ့ download ရယူပါ။
CS 1.6 ကိုဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ Play အနည်းဆုံးစနစ်လိုအပ်ချက်များ -
အကယ်၍ သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ website မှ CS 1.6 ကိုအခမဲ့ download ပြုလုပ်တော့မည်ဆိုလျှင် Counter-Strike 1.6 ဂိမ်းကစားရန်အတွက်ကွန်ပျူတာ၏အနည်းဆုံးလိုအပ်သောလိုအပ်ချက်များကိုသင်သိရမည်။ သင်၏ကွန်ပျူတာစနစ်သည် CS 1.6 ဂိမ်းများကိုဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ နှောင့်နှေးခြင်းမရှိဘဲဆော့ကစားနိုင်ပါသလား။ အကယ်၍ သင်က၎င်းကိုမသိရှိပါက Free Counter-Strike 1.6 ဂိမ်းများကိုတပ်ဆင်ရန်သင့်ကွန်ပျူတာသည်အနည်းဆုံးအရင်းအမြစ်များလိုအပ်သောကြောင့်စိတ်ပူစရာမလိုပါ။ ဒီဟာကမြင့်မားတဲ့ဂရပ်ဖစ်ကတ်ပြားတွေ၊ အထူးကောင်းမွန်တဲ့ကွန်ပျူတာသတ်မှတ်ချက်တွေလိုအပ်တဲ့ကစားနည်းလေးတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ X 1.6 ဖိုင်အရွယ်အစားသည်သင်၏ hard disk drive ၏ 250 MB သာကြာသည်။ Counter-Strike 1.6 ကို PC ပေါ်တွင်အခမဲ့ download လုပ်သည့်အခါ၎င်းသည်အလွန်သေးငယ်သောကြောင့်သင့်ကွန်ပျူတာ၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်တိုးတက်မှုကိုထိခိုက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အခမဲ့ CS 1.6 ကိုမကူးယူမီကွန်ပျူတာ၏အနည်းဆုံးလိုအပ်ချက်များကိုသိရှိရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ အကယ်၍ သင်သည်သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် CS 1.6 ကစားနေပါကသင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်အနည်းဆုံးလိုအပ်သောသတ်မှတ်ချက်များကိုရိုက်ကူးပြီးဖြစ်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ အကယ်၍ သင်သည် CS 1.6 ဒေါင်းလုပ်ဆွဲခြင်းနှင့်ကစားခြင်းတွင်အခက်အခဲရှိပါကသင်၏ကွန်ပျူတာကိုအောက်ဖော်ပြပါအချက်အလက်များစစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်။ CS 1.6 သည်အခမဲ့ download ရယူရန်အတွက်တွက်ချက်နိုင်သည်။ CS 1.6 အတွက်အနည်းဆုံးကွန်ပျူတာသတ်မှတ်ချက်များမှာ CPU - 0.8 GHz၊ Free Hard Disk Drive - 650 MB, Random Access Memory (RAM) - 128 MB ။
Counter-Strike ၁.၆ အတွက်အကြံပြုထားသည့်အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် CS 1.6 ကိုဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ ကစားရန်အင်တာနက်ကောင်းသောဆက်သွယ်မှုရှိရမည်
ဂိမ်းတွင်ပျော်မွေ့ရန်သင့်ကွန်ပျူတာတွင် 512 MB RAM (သို့) ထိုထက်မကရှိရမည်။
သင့်ကွန်ပျူတာတွင်အနည်းဆုံး 750 MB hard disk ရှိရမည်
CS 1.6 ကစားရန်သင့်တွင်မောက်စ်နှင့်ကီးဘုတ်ရှိရမည်။ သို့သော်မိုက်ကရိုဖုန်းသည်ရွေးချယ်စရာမရှိ။
CS 1.6 တွင်အတွေ့အကြုံကောင်းတစ်ခုရရှိရန်သင့်တွင်မည်သည့် Microsoft Windows operating system မဆိုရှိရမည်။
Counter Strike 1.6 ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်မှအဘယ်ကြောင့် download လုပ်သင့်သနည်း။
၎င်းကိုအစပိုင်းတွင်ဖြန့်ချိသောအခါ CS 1.6 အခမဲ့ဒေါင်းလုပ်သည်အများပြည်သူအတွက်မရရှိခဲ့ပါ။ သို့သော်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ Counter-Strike 1.6 ၏ developer များသည် non-steam 1.6 free free setup file ကိုစတင်တီထွင်ခဲ့သည်။ သို့သော်ယခုတွင်အခမဲ့ download CS 1.6 ဂိမ်းများကိုသင်ပေးသောဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုတွေ့နိုင်သည်။ C.S. ဂိမ်းနှစ်သက်သူများအတွက်ခက်ခဲသောလုပ်ငန်းတစ်ခုမှာအန္တရာယ်ရှိသောဗိုင်းရပ်စ်များ၊ ဖိုင်များ၊ ချည်နှောင်ခြင်းများ၊ ကြော်ငြာများသို့မဟုတ်အခြားမလိုအပ်သောဖိုင်များမပါဘဲ Free Counter-Strike 1.6 ကိုအလွယ်တကူဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်သည့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုရှာဖွေရန်ဖြစ်သည်။ Counter-Strike 1.6 ကို download လုပ်ရန်သင်သည်ပြီးပြည့်စုံသော web page ကိုရှာဖွေရန်လိုအပ်သည်။ Counter-Strike 1.6 ကိုအခမဲ့ဒေါင်းလုပ်ဆွဲသော ၀ ဘ်ဆိုဒ်အများစုတွင် CS 1.6 ဂိမ်းများ၏တိုးတက်မှုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုသာမကထိခိုက်နစ်နာစေသောဗိုင်းရပ်စ်များကြောင့်သင်၏ system အပေါ်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုပါအကျိုးသက်ရောက်စေသည့် extraneous files အမျိုးမျိုးရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်စာမျက်နှာ https://csdownload.net,နောက်ဆုံးပေါ် CS download 1.6 setup file ကိုအခမဲ့ရလိမ့်မည်။ ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အမြင့်မားစွာလုံခြုံပြီးအန္တရာယ်ရှိဖိုင်တွေကနေအခမဲ့သော CS 1.6 download လုပ်ရန် link တစ်ခုပေးပြီ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်၏ CS 1.6 သုံးစွဲသူသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်မှသိသိသာသာနှေးကွေးသောနည်းလမ်းများနှင့်ဗိုင်းရပ်စ်များမှအကာအကွယ်ပေးထားသည်။ csdownload.net သင်သည် CS 1.6 အားအန္တရာယ်ရှိသည့်ဖိုင်များနှင့် scripts များကိုအကာအကွယ် ပေး၍ ကျွန်ုပ်တို့၏စာမျက်နှာမှ Counter-Strike Strike ကိုဒေါင်းလုပ်ခြင်းဖြင့်မည်သည့်အရာကိုမဆိုရယူနိုင်သည်။ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး။
ဒါ့အပြင် Counter-Strike 1.6 ဗားရှင်းအဟောင်းများနှင့်အသစ် version များအားလုံးကိုဒီ website မှကူးယူနိုင်ပါတယ်။ Counter-Strike ၁.၆ XTCS ဗားရှင်း၊ Counter-Strike ၁.၆: မူရင်းဗားရှင်း၊ Counter-Strike 1.6 Process ဗားရှင်း၊ CS: Geo ဗားရှင်းစသည်တို့ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဤဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိလင့်များကိုအလွယ်တကူညှိနိုင်သည်။ CS 1.6 ဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်းသည်သင်စောင့်ဆိုင်းနေသောအရာများထက်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းပါသလား။ အခကြေးငွေရသော CS ကို download လုပ်ရန်၊ သင်၏ဂိမ်းများကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်နှင့်သူစိမ်းများနှင့်သူငယ်ချင်းများနှင့်ကစားခြင်းကိုနှစ်သက်ရန်အခမဲ့ခလုတ်ကိုသာနှိပ်လိုက်ပါ။
CS 1.6 ဗားရှင်း Counter-Strike ဗားရှင်းမှာလူကြိုက်များသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သူ၌စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောအင်္ဂါရပ်များနှင့် attribute များက Counter-Strike ဗားရှင်းဟောင်းများထက်ထူးခြား။ ဆွဲဆောင်မှုရှိစေသည်။ ဒီဗားရှင်း Counter-Strike ကိုပရိုဂရမ်မာများကအထူးသဖြင့်အများပြည်သူအတွက်ကစားသူများ၏စိတ်ဝင်စားမှုနှင့်လိုအပ်ချက်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။ Counter Strike တွင် multiplayer နှင့် single-player mode များပါ ၀ င်သည်။ developer များအနေဖြင့်ဗျူဟာမြောက်ဒိုင်းများ၊ crosshairs များပါသည့် snipers နှင့် backend updates များစွာကိုဖြစ်ပေါ်စေသောဗားရှင်းအသစ်တစ်ခုကိုထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။
ကစားသမားများတွင်ဓားများ၊ သေနတ်များ၊ ခန္ဓာကိုယ်သံချပ်ကာများ၊ လက်ပစ်ဗုံးများ၊ ရေငုပ်သင်္ဘောများနှင့်ဗုံးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအပါအဝင်နောက်ဆုံးပေါ်လက်နက်အမျိုးမျိုးပါသောဗားရှင်းအသစ် 1.6 ရှိနိုင်သည်။ ကစားသမားသည်ဂိမ်းကစားခြင်းနှင့်ဂိမ်း၏လိုအပ်ချက်များအရလက်နက်များ ၀ ယ်ခြင်းဖြင့်ငွေရှာနိုင်သည်။ ဤလက်နက်များသည်စစ်မှန်သောတိုက်ခိုက်ရေးအတွက်အသုံးပြုသောအမှန်တကယ်လက်နက်များနှင့်အလွန်ဆင်တူသည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းလက်နက်များသည်ကစားသမားများကိုနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသည်။
Counter-Strike ဗားရှင်းသစ်တွင်အရည်အသွေးမြင့်သောဂရပ်ဖစ်များ၊ ကောင်းမွန်သောမော်ဒယ်လ်၊ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်ပြောင်းလဲနိုင်သောအသံများရှိသည်။ CS 1.6 ၏မြေပုံသည်အခြားမည်သည့်ဗားရှင်းထက်မဆိုအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနိုင်သည်။
စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည်မှာ CS 1.6 Dose သည်ကြီးမားသောကွန်ပျူတာစနစ်မလိုအပ်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်အလွန်ကြီးမားသောဂိမ်းမဟုတ်သောကြောင့်မည်သည့်ကွန်ပျူတာစနစ်ကမဆိုဂိမ်းများကိုအလွယ်တကူကိုင်တွယ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည် Microsoft Windows ၏မူကွဲအားလုံးနှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် Counter-Strike သည်လူအများကြားတွင်ကျော်ကြားလာခဲ့ပြီး၎င်းသည်သူတို့၏နေ့စဉ်ဘဝပြproblemsနာများကိုမေ့ပျောက်စေပြီးသူတို့၏ကစားကွင်းအတွင်းရှိကွဲပြားခြားနားသောဖိစီးမှုများသောအခြေအနေများမှဝေးကွာသွားစေရန်ကူညီပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ CS 1.6 ကိုသူငယ်ချင်းများနှင့်သူစိမ်းများနှင့်ဒေါင်းလုပ် လုပ်၍ ကစားခြင်းသည်လူတို့အားအပျက်သဘောအတွေးများကိုကျော်လွှားစေပြီးလူတို့အားသူတို့ကိုယ်သူတို့ဖော်ပြခြင်းဖြင့်သူတို့ကိုယ်သူတို့ဖျော်ဖြေရန်အခွင့်အလမ်းပေးသည်။ အရည်အသွေးမြင့်သောဘာသာပြန်ဆိုခြင်းဂိမ်းများနှင့်စကားပြောခြင်းသည်ကစားသမားများအားဒဏ္legာရီလှုပ်ရှားမှုများ၏အင်္ဂါရပ်များကိုခံစားရန်အခွင့်အရေးပေးသည်။
ထို့ကြောင့်၎င်း၏ထူးခြားသောအင်္ဂါရပ်များနှင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအင်္ဂါရပ်များကြောင့် CS သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်လူကြိုက်များလာပြီးလူတို့သည်အားလပ်ချိန်၌ဤဂိမ်းကိုနှစ်သက်ကြသည်။ CS 1.6 ကိုအခမဲ့ download ရယူရန်အတွက်လုံခြုံစိတ်ချရသော link တစ်ခုပေးခြင်းဖြင့်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့ကူညီရန်ကျွန်ုပ်တို့ဤတွင်ရှိနေသည်။
Free Counter Strike 1.6 ဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ။
ဒီမှာပါ အခမဲ့ တန်ပြန်သပိတ်မှောက် ၁.၆ ဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ လုပ်နိုင်
ဒီစာမျက်နှာမှာသင် CS ၁.၆ ပြည့်သည် ထည့်သွင်းပါ ဗားရှင်း download လုပ်နိုင် အခမဲ့ ရရှိနိုင် ဒေါင်းလုပ် ETCS ကောင်တာ -Strike 1.6 ဗားရှင်း ရှိသည်။ ETCS ၁.၈ နောက်ဆုံးထုတ် ၂၀၁၁ သည် Counter Strike ၁.၆ ၏နောက်ဆုံးပေါ်နှင့်အဆင့်မြင့်ဆုံးဗားရှင်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီဗားရှင်းအသစ်မှာကောင်းမွန်တဲ့မော်ဒယ်လ်တွေ၊ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံတွေအများကြီးနဲ့တက်ကြွတဲ့အသံတွေရှိတယ်။ အရည်အသွေးမြင့်ဂရပ်ဖစ်ကြောင့်ယခင်ဂိမ်းဗားရှင်း CS 1.6 ထက်စွမ်းဆောင်ရည်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်။ ဤတွင်ဂိမ်းသည် Windows operating system တစ်ခုတည်းအတွက်သာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Windows ဗားရှင်းအားလုံးတွင်အလုပ်လုပ်သောအရေးကြီးဆုံးအရာဖြစ်သည်။
Counter Strike သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်လူကြိုက်အများဆုံးနှင့်အကျော်ကြားဆုံးသေနတ်ပစ်ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ CS သည်အကောင်းဆုံးရှုခင်း၊ အရည်အသွေးမြင့်မားသောမြေပုံများနှင့်ဂရပ်ဖစ်များဖြင့်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကအွန်လိုင်းပေါ်တွင်လူကြိုက်အများဆုံးသေနတ်သမားတစ် ဦး ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်ပဲ ကောင်တာ သပိတ်မှောက် မဟုတ်ဘူး ရေနွေးငွေ့ Downloader နှုန်းကမမြင့်သေးဘူး
ဒီနေရာတွင် Counter-Strike 1,6 setup ဖိုင်ကို download လုပ်ရန် link တစ်ခုတွေ့နိုင်သည်။ သို့သော် PC အတွက်ဒီ Counter Strike ဒေါင်းလုပ်တွင်မည်သည့်မြေပုံ၊ အသံနှင့်အခြားမည်သည့်ထပ်မံတပ်ဆင်မှုမျိုးမပါဝင်ပါ။
မင်းဆိုရင် အခမဲ့ကောင်တာ သပိတ်မှောက် 1,6 ဒေါင်းလုပ် ချင်တယ် သို့သော် ဤရိုးရှင်းသောအဆင့်များကိုလိုက်နာပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏စာမျက်နှာပေါ်တွင် ကောင်တာ သပိတ်မှောက်6အခမဲ့ Downloader အတွက်ခလုတ်တစ်ခုရှိတယ်
ဒေါင်းလုပ် CS6করুন ပြီးတော့ ဒေါင်းလုပ် အစ ကျေးဇူးပြု
setup ဖိုင်ကိုသင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်သိမ်းဆည်းပြီးသည်အထိကောင်တာ သပိတ်မှောက် ဒေါင်းလုပ် မိနစ်အနည်းငယ်မျှသာကြာသည် (သင်၏အင်တာနက်အမြန်နှုန်းပေါ် မူတည်၍)
Install (setup) ဖိုင်ကိုဖွင့်ပြီး Setup Full Counter ကို setup လုပ်ပါ
တပ်ဆင်မှုပြီးဆုံးသည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်၏ desktop ပေါ်ရှိ Counter Strike Game ဖြတ်လမ်းကိုဖွင့်ပြီး CS6 ကိုစတင်ဖွင့်ပါ။
မှတ်ချက်။ ။ CS install file နှင့်အတူသင်၏ browser ထဲတွင်အတူတကွ download လုပ်ပြီးထည့်သွင်းထားသောအပိုပရိုဂရမ်များသို့မဟုတ် application များမရှိပါ။ ဤသည်အခြားမလိုချင်တဲ့ applications များမရှိသောရိုးရှင်းသောတိုက်ရိုက် download link ကိုဖြစ်ပါတယ်။
Counter-Strike 1.6 setup file ကိုဂိမ်းအပြောင်းအလဲများမှကာကွယ်ရန်၊ ဂိမ်းဆာဗာကိုရှာဖွေရန်အလုပ်လုပ်သောဆာဗာဘရောက်ဇာအတွက်ကစားသမားတစ်မျိုးတည်းသော mode နှင့် bot (CPU player) ရှိသည်။ ကောင်တာ သပိတ်မှောက် ဒေါင်းလုပ် Windows 10 အမှားအယွင်းများ (သို့) အမှားများမရှိသောအရည်အသွေးမြင့် CS 1.6 ဗားရှင်း။
မှတ်ချက် - မင်းက PC အတွက်အခမဲ့ပါ ကောင်တာ သပိတ်မှောက် 1.6 ဒေါင်းလုပ် လုပ်နိုင် ဒါပေမဲ့မင်းအဲဒီလိုလုပ်ရင်မင်းမှာမင်းရှိတယ်ဆိုတာမင်းပြောတယ် ဒီဂိမ်းမှာမူရင်းမိတ္တူတစ်ခုပါပြီး ရေနွေးငွေ့ ကောင်တာ သပိတ်မှောက် ဒေါင်းလုပ် မိတ္တူသည်ကိုယ်ပိုင်အသုံးပြုရန်အတွက်သာဖြစ်သည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်အခြားရည်ရွယ်ချက်များအတွက် PC ကို ဘို့ ကောင်တာ သပိတ်မှောက် ဒေါင်းလုပ် မျှဝေခြင်းသည်မမှန်ကန်ပါ။
ဒါ ဂိမ်း၏အဘို့, ဒါဟာသဟဇာတကွန်ပျူတာစနစ်လိုအပ်ချက်ရှိသည်ဖို့အကြံပြုသည်။ အသုံးပြုရန်အကောင်းဆုံးစနစ်များမှာ Windows 10, Windows 8 သို့မဟုတ် 8.1, 7, XP နှင့် 2000, ME, 98, 95 Reasons ကောင်တာ သပိတ်မှောက် ပန်းပွင့် ဂိမ်းများ ဒေါင်းလုပ် အလွယ်တကူသူတို့အပေါ်မှာအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
CS ထည့်သွင်းခြင်းအတွက်အရေးကြီးသောအခြား operating system လိုအပ်ချက်များ:
CPU clock speed၊ အမြန်နှုန်း 1200 GHz (သို့) ထိုထက်မက။
512 MB RAM နှင့်အထက်
750 MB ရရှိနိုင် hard disk ကိုနေရာ။
ကောင်တာ သပိတ်မှောက် စီးရီး အကြောင်း
ဒီစာပိုဒ်မှာတော့ CS သမိုင်းကြောင်းအကြောင်းပြောမယ်။ Counter-Strike သည် ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင် Min-Guzman "Lee နှင့် Jess Cliff" မှထုတ်ဝေသောအွန်လိုင်းလှုပ်ရှားမှုမှလူတစ် ဦး သေနတ်သမားဂိမ်းဖြစ်ပြီးမူလကဝက်ဘ်ဆိုက်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်သည်။ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းတွင် Valve မှ Microsoft Windows တွင်ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ ပလက်ဖောင်း။ ဂိမ်းမကြာမီကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်လူကြိုက်အများဆုံးသေနတ်သမားဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။
ပထမတစ်ခုကတော့အွန်လိုင်းပေါ်တွင်အရှိန်အဟုန်မြန်ပြီးအသင်းကိုအခြေခံသောဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကစားသမားများသည်အကြမ်းဖက်သမားများ (သို့) အကြမ်းဖက်သမားဆန့်ကျင်ရေးအကြားရွေးချယ်နိုင်သည်။ အဆိုပါနှစ်သင်းအနိုင်ရရှိသည်အထိတစ် ဦး ချင်းစီကတခြားဆန့်ကျင်ကစား။ ရန်သူအဖွဲ့ ၀ င်အားလုံးကိုသတ်နိုင်သည့်အဖွဲ့သည်အနိုင်ရသည်။ ဒုတိယအချက် - Counter-Strike - လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခြင်း၊ ဓားစာခံကယ်ဆယ်ခြင်းနှင့်ဗုံးစွန့်ပစ်ခြင်းအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအခြေအနေများရှိသည်။
ထို့အပြင်ဂိမ်းတွင်မြို့ပြ၊ အာတိတ်၊ တောတွင်းနှင့်သဲကန္တာရစသည့်ပတ်ဝန်းကျင်အမျိုးမျိုးတွင်မြေပုံအမျိုးမျိုးရှိသည်။ ဤသည်ကစားသမားများသူတို့ကစားချင်သောပတ်ဝန်းကျင်၏အမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ခွင့်ပြုပါတယ်။ Counter-Strike 1.6 ဖြန့်ချိပြီးကတည်းကဂိမ်းမှမြေပုံများထပ်မံထည့်သွင်းခြင်းမပြုရ
ကစားသမားသည်ဂိမ်းတွင်ဖော်ပြထားသောလက်နက်အမျိုးမျိုးမှရွေးချယ်နိုင်သည်။ ကစားသမားများသည်လက်နက်အမျိုးမျိုးမှဓားများ၊ သေနတ်များနှင့်စက်သေနတ်များအထိရွေးချယ်နိုင်သည်။ လက်နက်များရွေးချယ်သောအခါကစားသမားသည်လက်နက်များမည်မျှကျေနပ်အားရကြောင်းပြန်လည်စဉ်းစားသင့်သည်။ လက်နက်ရွေးချယ်ရန်အခြားအကြောင်းပြချက်တစ်ခုမှာ၎င်းကိုကြည့်ရှုရန် (သို့) အေးမြစေရန်ဖြစ်သည်။ နောက်ထပ်သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုမှာလက်တွေ့ဘ ၀ တိုက်ခိုက်မှုများတွင်မည်သည့်လက်နက်များကိုအသုံးပြုမည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်သည်။
CS ၁.၆ အကြောင်း
နောက်ဆုံးပေါ် Counter-Strike ဗားရှင်းတစ်ခုဖြစ်သော Counter-Strike ၁.၆၊ ဂိမ်းနှင့်ဗားရှင်းနံပါတ်အတွက်အဓိကအကြောင်းအရာများ update သည်ယခုအလွန်လူကြိုက်များပြီးများသောအားဖြင့်မူရင်းဂိမ်းကိုကျန်အပိုင်းများနှင့်ခွဲခြားရန်အသုံးပြုသည်။ ဒီမှာလွယ်လွယ်ကူကူပဲ PC ကို ဘို့ က ဂိမ်းများ တည်ဆောက်သည် ဒေါင်းလုပ် ပြီးတော့ဂိမ်းကိုသင့်ကွန်ပျူတာထဲမှာထည့်ပါ။
ယခုအချိန်တွင် CS 1.6 သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကျွမ်းတဝင်အရှိဆုံး CS ဂိမ်းဗားရှင်းဖြစ်ပြီးနိုင်ငံအသီးသီးရှိလူတို့တွင်အများဆုံးအသုံးပြုသည်။ လူတွေကဒီအားကစားပြိုင်ပွဲတွေကိုစီစဉ်နေကြတုန်းပဲ။ သင်ဒီမှာရှာနိုင်သည် https://www.game.tv/find-tournaments/-counter-strike-1.6-tournaments
Counter-Strike ၁.၆ ကို ၂၀၀၃ ခုနှစ်၊ ဒီဂိမ်းဗားရှင်းမှာအဟောင်းများမှအင်္ဂါရပ်အသစ်များစွာရှိသည်။
ချဲ့ခြင်းနှင့်ကျန်းမာရေးကို HLTV တွင်ထည့်သွင်းထားသည်
Fixed bug ကို
Counter Strike 1.6 သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်လူကြိုက်အများဆုံးသေနတ်သမားဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်ပြောင်းလဲမှုနှင့်ဗားရှင်းအသစ်များစွာရှိသည်။ ဂိမ်းဂရပ်ဖစ်များ၊ bug များနှင့်အခြားဒြပ်စင်များတိုးတက်မှုသည်ပုံမှန်မွမ်းမံထားသောဗားရှင်းများ၏လူကြိုက်များမှုကိုတိုးပွားစေသည်။
ဂိမ်းကတကယ်ကိုဟောင်းနွမ်းနေပေမယ့်လူကြိုက်များမှုဟာအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်မြင့်မားနေပါတယ်။ လူတွေကဗားရှင်းအသစ်ပဲ CS ဒေါင်းလုပ် ဖိုင်များဒေါင်းလုပ်ချခြင်းမဟုတ်ပါ၊ CS 1.6 သည်လူကြိုက်အများဆုံး download ဖြစ်သည် လုပ်ရန် CS ဂိမ်းတစ်ခု။ ဒီမှာပါ ကောင်တာ သပိတ်မှောက် ရေနွေးငွေ့ အခမဲ့ ဒေါင်းလုပ် လုပ်ရန် လုပ်နိုင် သင်ထိုသို့မပြုလုပ်သေးပါက၊ အထက်ဆောင်းပါးတွင်ဖော်ပြထားသောရိုးရှင်းသောအဆင့်များကိုလိုက်နာပါ။
ဒီနေရာတွင် ETCS Counter Strike 1.6 အသစ်၏နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းကိုဤနေရာတွင် download ရယူနိုင်သည်။
မင်း ဒေါင်းလုပ် ကောင်တာ သပိတ်မှောက် 1.6 အခမဲ့ ပြည့်သည် ဗားရှင်း ဖိုင်ဖော်ပြချက်ကိုဒီမှာဖတ်နိုင်ပါတယ်။
ဂိမ်းခေါင်းစဉ်: ETCS Counter Strike ၁.၆ နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ချက် ၂၀၁၁
စာရေးသူ - ETCS အဖွဲ့နှင့် တွဲဖက်၍ Valve software
ထုတ်ဝေရေးအဖွဲ့ - ETCS အဖွဲ့
ဂိမ်း mode: ကွန်ယက် (အင်တာနက်၊ ဒေသတွင်းကွန်ယက်၊ တစ်ခုတည်းသော bot)
စက်ပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှု - Windows Vista / XP / 7/8 / 8.1 / 10
ကောင်တာသပိတ် 1.6 ဒေါင်းလုပ် ပြည့်သည် ဗားရှင်း ပုံမှန်မြေပုံများ၊ အသံနှင့်မော်ဒယ်များပါ ၀ င်ခြင်းသည်ဂိမ်း၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်ဤ CS အခမဲ့ ဒေါင်းလုပ် ထည့်သွင်းပါ ဖိုင်ထဲမှာအသစ်ထည့်ထားသောသို့မဟုတ်ပြုပြင်ထားသောစကားလုံးများသို့မဟုတ်မြေပုံများမရှိပါ။ Moded Counter Strike ဗားရှင်းကိုဤနေရာမှလည်းကူးယူနိုင်သည် https://csdownload.net/counter-strike-1-6-indir/
မြေပုံများ၊ စကားလုံးများ၊ ဂရပ်ဖစ်များနှင့်ဂိမ်းများကိုအသွင်အပြင်အသစ်များပြောင်းလဲလိုပါကသင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီတိကျတဲ့အလိုရှိသောမြေပုံများ၊
Counter-Strike ၁.၆: ETCS ဗားရှင်းအခမဲ့ဒေါင်းလုပ်:
Counter-Strike 1.6: နောက်ဆုံးပေါ်နှင့်အဆင့်မြင့် XTCS ဗားရှင်း၊ Extreme Counter-Strike 1.6, CS 1.6 ။ ၎င်းသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော CS 1.6 ဗားရှင်းဖြစ်ပြီးလက်တွေ့ကျသောဂရပ်ဖစ်များ၊ အသံ၊ လက်နက်များ၊ အရာဝတ္ထုများ၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောမော်ဒယ်လ်နှင့်အခြားအဖိုးတန်သောမွမ်းမံမှုများပါဝင်သည်။
သင်သည်အခမဲ့ ETCS Counter-Strike 1.6 ကို download ပြုလုပ်လိုပါကအထက်ပါအခမဲ့ download ETCS CS 1.6 ကိုနှိပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အခမဲ့ ETCS Counter-Strike 1.6 set-up တွင် FPS နှင့်တည်ဆောက်ပုံအသစ်တို့ပါ ၀ င်သည်။ CS 1.6 ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်မှတပ်ဆင်ခြင်း - ETCS သည်အကောင်းဆုံးကစားနည်းအတွေ့အကြုံကိုသေချာစေသည်။
Counter-Strike ၁.၆ နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်သည့်ဇာတ်ကောင်များ။
dual-protocol ကို (48 + 47) client ကို
နောက်ဆုံးပေါ် SXE ဆေးထိုး antichit နှင့်အတူသဟဇာတ
နောက်ဆုံးပေါ် CS 1.6 bot ပါဝင်သည်
Fixed အဟောင်းနှင့်အသစ် installers များကိုလက်တွေ့ကျသောအသံတွင်ထည့်သွင်းထားသည်
Anti-Slowhack tool ပါဝင်သည်
Steam GCF (Game Cache File) မှ 100% ရှင်းလင်းစွာဖြတ်ပစ်ခြင်း
Counter-Strike ၁.၆ မြေပုံများထပ်ထည့်ထားသည်
Counter Strike 1.6 Warzone စနစ်
အခမဲ့ download Counter-Strike 1.6 Warzone:
Counter-Strike ၁.၆: Counter-Strike လုပ်ငန်းပိုင်ရှင် Valve သည် Warzone ကိုနိုဝင်ဘာ ၁၇၊ ၂၀၁၃ တွင်ပထမဆုံးဖြန့်ချိခဲ့ပြီး၎င်းသည်အခြား Counter-Strike ၁.၆ နှင့်အနည်းငယ်ကွဲပြားသည်။ CS: Verzone တွင် CS 1.6 အခြေခံသဘောတရားရှိသော်လည်းပိုမိုမြင့်မားသော resolution နှင့်ဂရပ်ဖစ်များပါရှိသည်။ ဤအရာသည်စစ်ရေးအပြောင်းအလဲများကြောင့်အနည်းငယ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်။ လွှတ်ပေးပြီးကတည်းကလူတွေဟာ Shooter CS 1.6 Verzon ကစားခြင်းကိုနှစ်သက်ကြသည်။ Counter-Strike 1.6 Verzone ကို csdownload.net စာမျက်နှာရှိလင့်ခ်ကိုအသုံးပြုပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်မှ download ပြုလုပ်နိုင်သည်။ Free Download CS 1.6 အခမဲ့ Verzon CS 1.6 Xfile ကို Verzon ခလုတ်ကို နှိပ်၍ သင်၏ PC သို့ဒေါင်းလုပ်ဆွဲယူပါလိမ့်မည်။ Free Download Verzon CS 1.6 ပြီးသွားရင်အမှားအယွင်းများမရှိဘဲအလွယ်တကူထည့်သွင်းနိုင်သည်။ CS XNUMX Warzone Free တွင်ဖော်ပြထားသော link သည်အပြည့်အဝအလုပ်လုပ်ပြီးလုံခြုံစိတ်ချရသောမလိုလားအပ်သောဗိုင်းရပ်စ်များ၊ ကြော်ငြာများ၊
CS 1.6 အင်္ဂါရပ်များ - စစ်မြေပြင်၌:
Online ကို LAN များနှင့် bot များဖြင့်ကစားနိုင်သည်။
Windows 7, 8, 10, XP, Vistaအတူအလုပ်လုပ်ပါ
သုံးစွဲသူများသည် PXNUMXPXNUMX ဆာဗာများကိုလည်းဆက်သွယ်နိုင်သည်။
100% ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဂိမ်း cache ဖိုင်။
Dual protocol (၄၈ + ၄၇) ဆာဗာများကိုလည်းထည့်သွင်းထားသည်
Orange Box ပါသော Steam မဟုတ်သောဗားရှင်း ၄၄၊
နောက်ဆုံးပေါ် CS ၁.၆ botထည့်ပါ
နောက်ဆုံးပေါ် AMX Mod XV 1.8.2 ကိုထည့်သွင်းထားသည်။
Counter Strike 1.6 CSGO ဗားရှင်း
Counter-Strike 1.6 CS ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ။ Go Mode:
Counter-Strike 1.6 CS: Geo Mode ဆိုသည်မှာ CS 1.6 ဂိမ်းတွင် Counter-Strike: Global Offensive gameplay ကိုတွေ့ကြုံခံစားနိုင်သည့်ပြုပြင်ထားသော version တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီအထူးသဖြင့် mode သည် CS: Go: Counter Strike 1.6 နှင့်အလုပ်လုပ်သည်။ ၎င်းသည်အဓိကဂိမ်း Counter-Strike မှတူညီသောမော်ဒယ်များ၊ မြေပုံများ၊ အသံများ၊ အသားအရေ၊ ဖျက်လိုဖျက်ဆီးများနှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံတို့ဖြင့်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များမပါရှိသည့်မည်သည့်ကွန်ပျူတာတွင်မဆိုအကောင်းဆုံးအမြင်အာရုံအတွေ့အကြုံကိုပေးစွမ်းနိုင်သည်။ CS 1.6 CS တွင်အပြောင်းအလဲအနည်းငယ်သာရှိသည် - Geo ကိုဖေါ်ထုတ်ရန်နှင့်အကဲဖြတ်ရန်ခက်ခဲသည်။
Free Counter-Strike 1.6 CS: Geo ကိုဒီစာမျက်နှာတွင်သင်ဒီမှာရရှိနိုင်ပါသည်။ ဤစာမျက်နှာကိုပေးထားသောတိုက်ရိုက်လင့်ခ်မှတစ်ဆင့်ကူးယူနိုင်သည်။ Download Counter Strike 1.6 CS ကိုကြည့်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ခလုတ်ကိုသွားပြီး၎င်းပေါ်တွင်ကလစ် နှိပ်၍ သင်၏ဂိမ်းကိုယနေ့အခမဲ့ရယူပါ။
XNUMX MB RAM မှတ်ဉာဏ်
XNUMX GB disk သိုလှောင်မှု
Per-Strike 1.6 CSGO ဂိမ်းအင်္ဂါရပ်များ:
ဒီ mode မှာ edit လုပ်တဲ့ CS 1.6 model သည် CS: Geo ဖြစ်သည်
ဤပြင်ဆင်တည်းဖြတ်မှုပုံစံတွင်ဂိမ်း၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာထိုးစစ်ဗားရှင်းနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ ရေဒီယို၊ လက်နက်သံ၊ အသံသက်ရောက်မှု (မြေပုံအသံ၊ စသည်တို့)
ဤဗားရှင်းတွင်တည်းဖြတ်ပြီးပုံသွင်းထားသောမြေပုံသည် CS: Geo နှင့်ဆင်တူသည်။ ၎င်းသည်အခြေခံအားဖြင့်ဂိမ်းတွင်ရှိသောပုံမှန်မြေပုံများနှင့်အတူပါရှိသည် (de_dust2, de_inferno, cs_assault, etc)
ဂိမ်း၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံများသည်ပြောင်းလဲသွားပြီးအခြေခံအားဖြင့် CS: Geo ဗားရှင်းနှင့်တူသည်
CS: သေနတ်နှင့်ခဲယမ်းမီးကျောက်စျေးဝယ် menu သို့သွားပါ
Active Server ရှာဖွေခြင်း
ဖိုင်အရွယ်အစား 400 MB
ကောင်တာ သပိတ်၏ သမိုင်း
Counter-Strike သည်သမိုင်းတွင်အကျော်ကြားဆုံးပထမ ဦး ဆုံးရိုက်ကူးသည့်ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်ရှည်လျားပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောထူးခြားသည့်ဂိမ်းသမိုင်းရှိသည်။ မင်းအများစုဟာအချိန်ကုန်ဆုံးကစားအများဆုံးဗီဒီယိုဂိမ်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Counter-Strike ရဲ့သမိုင်းကိုမသိနိုင်တာဖြစ်နိုင်တယ်။ ဂိမ်းကစားသူတစ်ယောက်အနေဖြင့် Counter-Strike ၏ဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်ကောင်းမွန်သော scripted, single-player ပရဟိတလုပ်ငန်းမှအလျင်မြန်ဆုံးလူကြိုက်အများဆုံး၊ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးအချိန်နှင့်အမျှအများဆုံးဗီဒီယိုဂိမ်းများကိုလေ့လာသင့်သည်။ Counter-Strike အတွက်ဂိမ်းလောကတွင်လွတ်လပ်သောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအဖြစ်ဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ရန်အတွက် beta ဗားရှင်း ၁၇ ခုကိုယူဆောင်ခဲ့သည်မှာထင်ရှားသည်။ ကစားပွဲဟောင်းဖြစ်လင့်ကစားပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကစားသမားများအပါအ ၀ င်သန်းနှင့်ချီသောလူများသည်ကစားခြင်းနှင့်တန်ပြန်သပိတ်မှောက်ခြင်းများကိုခံနေရဆဲဖြစ်သည်။
လွန်ခဲ့သော ၂၁ နှစ်ခန့်က ၁၉၉၉ တွင်၊ ပထမ ဦး ဆုံးဂိမ်းဖြစ်သော Half-Life ဟုခေါ်သောပထမဆုံးလူသေနတ်သမားဂိမ်းကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ Valve ကော်ပိုရေးရှင်းတန်ပြန်သပိတ်ရှေ့ဆောင်။ ၎င်းသည်အမေရိကန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီးကွန်ပျူတာဂိမ်းများကိုထုတ်ဝေထုတ်လုပ်သည်။ Sierra Studios သည်ဘဝတစ်ဝက်ကိုကြီးမားသောတုန်ခါမှုဖြင့်ဖြန့်ချိခဲ့ပြီးဂိမ်းကစားခြင်းကိုကမ္ဘာတဝှမ်းလုံးရှိနှစ်သက်မှုကိုအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ Counter-Strike သည်ကစားသမားများကြားတွင်အလွန်လူကြိုက်များလာပြီးပတ် ၀ န်းကျင်တစ်ခုလုံးဖွံ့ဖြိုးလာခဲ့ပြီးပရိုဂရမ်မာများသည်တစ် ဦး ချင်းစီအတွက်ပုံစံများကိုစတင်ဖန်တီးခဲ့ကြသည်။
ကနေဒါပရိုဂရမ်မာမင်းလီနှင့်သူ၏သူငယ်ချင်း Jess Cliff တို့သည် Half-Life Mode Counter-Strike ၏ beta ဗားရှင်းကိုဖန်တီးခဲ့ကြသည်။ Half-Life ၏ပထမဆုံး beta ဗားရှင်းကိုတီထွင်ရန်သူတို့အတွက်တစ်လခွဲလောက်အချိန်ယူခဲ့ရသည်။
Min Ley နှင့် Jess Cliff တို့သည် beta ကိုဆက်လက်တီထွင်ရန်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းခဲ့ပြီး CS အတွက်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုလည်းဖန်တီးခဲ့ကြသည်။ အစပိုင်းတွင် Counter-Strike တွင်မြေပုံ (၄) ခုနှင့်လက်နက် (၉) ခုသာရှိသော်လည်းလူကြိုက်များသောနေရာမှာမူရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ လူများသည် XNUMXVXNUMX စီတန်းလှည့်လည်ခြင်းကိုအကြမ်းဖက်မှုဆန့်ကျင်သူအဖြစ်လည်းကောင်း၊ အကြမ်းဖက်သူတစ် ဦး အဖြစ်လည်းကောင်းတီးခတ်လေ့ရှိခဲ့ပြီးထိုအုပ်စုနှစ်ခုကိုယနေ့တိုင်အသုံးပြုနေဆဲဖြစ်သည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှတန်ပြန်သပိတ်မှောက်မှုများသည်ပိုမိုအာရုံစိုက်လာပြီးလူများကဂိမ်းကိုနှစ်သက်ကြသည်။
Counter-Strike ၏လူကြိုက်များမှုနှင့်နှစ်နှစ်အသိုင်းအဝိုင်းတည်ဆောက်ခြင်းစနစ်ကြောင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းထုတ်လုပ်သူသည် ၂၀ နှင့် ၂၀ အတွင်းပဉ္စမ beta ထွက်ပြီးနောက် Le နှင့် Cliff ကိုငှားရမ်းခဲ့သည်။ Valve သည်တန်ပြန်သပိတ်မှောက်မှုရရှိပြီးပရိုဂရမ်မာမင်းလီနှင့် Jess Cliff Valve တို့နှင့်စတင်အလုပ်လုပ်သည်။ Counter-Strike သည်စက်တင်ဘာလ ၂၀၀၀ တွင် PC အတွက်ဖြန့်ချိခဲ့ပြီးတရားဝင် Counter-Strike စီးရီးဖြစ်သည်။
Counter-Strike ကိုပထမဆုံးထုတ်ဝေသည့်အရာရှိတွင်အလွန်လူကြိုက်များသည့်မြေပုံနှစ်ခုဖြစ်သော Attack (cs_assault) နှင့် Mochipathar (de_cabble) ရှိပြီးမြေပြင်ပေါ်တွင်သာကစားခဲ့သည်။ mode တစ်ခုအနေဖြင့်၎င်းသည်ကြီးမားသောနောက်ဆက်တွဲဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း PC အတွက်တရား ၀ င် Counter Strike ထွက်ရှိပြီးနောက်လူအများကြားလူသိများလာခြင်း
Counter-Strike ၏အသိုင်းအ ၀ ိုင်းသည်ပိုမိုကြီးထွားလာသည်နှင့်အမျှလူများစွာသည်ဂိမ်းကစားခြင်းကိုစတင်လာကြသည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ကစားခဲ့သောကြောင့်လူကြိုက်များမှုမြင့်တက်ခဲ့သည်။ Multiplayer မတိုင်မီကရှိခဲ့ဖူးသော်လည်း counter-strike သည်အခြားအရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးပွဲတစ်ပွဲတည်း၌သာကစားရန်လွယ်ကူသည်။ သူငယ်ချင်းများ (သို့) သူစိမ်းများနှင့်အတူဂိမ်းကစားခြင်းကိုကွန်ပျူတာရှေ့တွင်နာရီပေါင်းများစွာမနေရန်လိုအပ်သည်။ လူတို့သည်ရရှိနိုင်သည့်အချိန်ပေါ် မူတည်၍ မိနစ်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်ရက်အနည်းငယ်ကစားနိုင်သည်။ ဒါဟာကစားရန်ထူးခြားတဲ့နှင့်လွယ်ကူသောဂိမ်းခဲ့ပေမယ့်ကျွမ်းကျင်ဖို့ခဲယဉ်း။ ၎င်း၏ထူးခြားသောစတိုင်နှင့်စိန်ခေါ်မှုသဘောသဘာဝကြောင့်၎င်းသည်ဂိမ်းကစားသူများအကြားတွင်ရေပန်းစားသည်။ ၎င်းသည်လူများအတွက် Pro အတွက်ပြုလုပ်သောဗီဒီယိုဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အစဉ်အမြဲပြုလုပ်ခဲ့သောသြဇာအရှိဆုံးကစားသမားများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ မျက်မှောက်ခေတ်ကမ္ဘာတွင်စက်မှုဆိုင်ရာတန်ပြန်သပိတ်မှောက်မှုများစွာ၏အကောင်အထည်ဖော်မှုကိုသင်တွေ့နိုင်သည်။
တန်ပြန်သပိတ်မှောက်ဗားရှင်း ပြီးတော့ နောက်ဆုံးသတင်း
မကြုံစဖူးသော CS မြင့်တက်လာခြင်းနှင့်လူများကိုဆွဲဆောင်နိုင်မှုတို့သည် developer များအနေဖြင့်ဤဂိမ်းကိုပိုမိုစိတ် ၀ င်စားမှုရှိစေရန်နှင့်လူတို့နှစ်သက်စေရန်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ လူတွေရဲ့ရည်မှန်းချက်ကအတွေးအခေါ်တွေဖြစ်လာပြီးပရိုဂရမ်မာတွေကအတွေးအခေါ်တွေကိုလက်တွေ့ဖြစ်လာတယ်။ Valve Corporation သည်၎င်း၏ Anti-Cheat System (VAC) ကို ၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင်စတင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်စနစ်အားခိုးယူခြင်းသို့မဟုတ် hack ရန်မဖြစ်နိုင်သလောက်ကစားသမားတစ် ဦး သည်ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်ကြိုးစားလျှင်သူသို့မဟုတ်သူမသည်ချက်ချင်းပိတ်ပင်ခြင်းခံရလိမ့်မည်။ Valve သည် ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် Counter-Strike Version XNUMX တွင်အကြမ်းဖက်သမားများနှင့်အကြမ်းဖက်သမားများအတွက်မြေပုံများနှင့်လက်နက်အသစ်များကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
Valve၊ Ritual Entertainment နှင့် Turtle Rock စတူဒီယိုများသည် Counter-Strike: Condition Zero ကို ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင်ဖန်တီးခဲ့ပြီး Sierra နှင့်နားထောင်ရန်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ၎င်းတွင်တစ်ခုတည်းသော player နှင့် multiplayer mode များပါ ၀ င်သည်။ ပရိုဂရမ်မာများသည် Deleted Scenes ဟုခေါ်သောသာသနာပြုလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သူတို့ဟာဂရပ်ဖစ်ကိုတိုးတက်စေခဲ့တယ်၊ ကစားသမားအများစုသည်၎င်းသည်ထိုက်တန်သည်ဟုထင်မြင်။ မရသည့်တန်ပြန်သပိတ်မှောက်မှုပုံစံအသစ်သို့ပြောင်းရန်စိတ်မဝင်စားကြပါ။ သူတို့ကပွဲအသစ်ကိုစိတ်ကျေနပ်မှုမပေးခဲ့ကြပါ။ Condition Zero အစားတန်ပြန်တိုက်စစ်ဟောင်းကိုပိုမိုနှစ်သက်ကြသည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ Valve သည် Counter-Strike: Source နှင့် Counter-Strike: Global Attack ကဲ့သို့သောတန်ပြန်သပိတ်အသစ်များကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
ထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်မှုများနှင့်ထောင်နှင့်ချီသောမွမ်းမံမှုများပြုလုပ်ပြီးနောက် Valve သည်ဂိမ်းကို၎င်းကိုယနေ့ဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲရန်ကူညီပေးခဲ့သည်။ သူတို့က CSK ကိုတစ်ချိန်တည်းမှာအကောင်းဆုံးဗီဒီယိုဂိမ်းဖြစ်စေရုံသာမကကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံးအကြိုက်ဆုံးဂိမ်းအဖြစ်လည်းပါသည့်ပရိသတ်များနှင့်လူထု၏အမိန့်ဖြင့် Counter-Strike တွင်ဆက်လက်လုပ်ကိုင်သည်။ မူလတန်ပြန်သပိတ်မှောက်မှုအပြီး ၂၁ နှစ်အကြာတွင်၎င်းသည်အသက်ရှင်ဆဲဖြစ်ပြီးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိသန်းနှင့်ချီသောလူများသည် CS ကစားခြင်းကိုနှစ်သက်ကြသည်။ အားလုံးသောအားဖြင့်၎င်းသည်ပြီးပြည့်စုံသောဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ တန်ပြန်သပိတ်မှောက်ရန်သင်ခန်းစာသည်လွယ်ကူသော်လည်းကျွမ်းကျင်ရန်ခက်ခဲသည်။ ဒါဟာနောက်မျိုးဆက်အတွက်ဂိမ်းဖြစ်လိမ့်မည်။
Counter-Strike ၁.၆ အကြောင်း
CS 1.6 သည်ပထမ ဦး ဆုံးသောလူတစ် ဦး သေနတ်ပစ်ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးလှုပ်ရှားမှုနှင့်စွန့်စားမှုများပါ ၀ င်ပြီး၎င်းသည် Counter-Strike ၏အကျော်ကြားဆုံးဗားရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကို ၂၀၀၃ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၃ ရက်နေ့တွင်စတင်ဖြန့်ချိခဲ့ပြီး Valve Corporation မှတီထွင်ခဲ့ပြီး Steam မှထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်လူအများကြားတွင်လူကြိုက်များလာပြီးကမ္ဘာတစ်လွှားမှပရိသတ်များကိုစုရုံးခဲ့သည်။ CS 13 ၏အသိုင်းအ ၀ ိုင်းသည်နေ့စဉ်နှင့်အမျှတိုး။ ကြီးထွားလာနေပြီးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံး၌လူတို့သည်ကစားနေကြသည်
CS သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးမားဆုံးနှင့်အများဆုံးကစားသောဗီဒီယိုဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်မှာသေချာသည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကထွက်ပေါ်လာခဲ့သော်လည်းထိုဂိမ်းသည်အလွန်တန်ဖိုးရှိပြီးအားကစားတွင်အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်။ လူသန်းပေါင်းများစွာသည် PC တွင် CS 1.6 ရှိနေဆဲဖြစ်ပြီးထောင်နှင့်ချီသောလူသစ်များသည်၎င်းကိုအင်တာနက်မှအခမဲ့ download လုပ်နေကြသည်။ ထို့အပြင် CS 1.6 International Tournament ကိုနှစ်စဉ်ကျင်းပပြီးကမ္ဘာတစ်လွှားမှဂိမ်းကစားသူများကဤအဖြစ်အပျက်များတွင်ပါဝင်ကြသည်။ အတော်များများကနိုင်ငံတကာကစားသမားကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်နာမည်နှင့်ကျော်ကြားမှုရရှိခဲ့ပါပြီ။
၎င်းသည်ကစားသမားများသည်အကြမ်းဖက်အုပ်စု၊ အကြမ်းဖက်မှုဆန့်ကျင်ရေးအသင်း (သို့) ပရိသတ်များတွင်ပါ ၀ င်သည့်အချိန်တိုင်းတွင်လူကြိုက်အများဆုံးပထမသေနတ်သမားအမျိုးအစားဖြစ်သည်။ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့စီသည်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တစ်ခုရရှိရန်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး တိုက်ခိုက်ခြင်းဖြင့်သူတို့၏တာဝန်ကိုပြီးမြောက်အောင်လုပ်ဆောင်ရမည်။ ၎င်းတို့သည်ဗုံးများထုတ်လုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်ပိတ်ခြင်း (သို့) ဓားစာခံများကိုအကြမ်းဖက်သမားများထံမှကာကွယ်ရန်အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ရမည်။ အကြမ်းဖက်အုပ်စုသည်ဗုံးတစ်လုံးသယ်ဆောင်ကာနေရာတစ်နေရာတွင်နေရာချကာအနိုင်ရခြင်းမပြုမီဗုံးများဖျက်သိမ်းခြင်းကိုတားဆီးရန်အကြမ်းဖက်သမားဆန့်ကျင်ရေးအဖွဲ့အားတိုက်ခိုက်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူအကြမ်းဖက်မှုဆန့်ကျင်ရေးအဖွဲ့သည်အကြမ်းဖက်သမားများအားတိုက်ခိုက်ခြင်းဖြင့်ဂိမ်းကိုအနိုင်ရရန်ဘာမျှမမှားပါ။ ဓားစာခံမြေပုံတွင်အကြမ်းဖက်သမားတန်ပြန်အုပ်စုသည်ဂိမ်းကိုအနိုင်ရရန်အတွက်အကြမ်းဖက်သမားတစ် ဦး ကဓားစာခံများကိုကယ်ဆယ်ရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ အကယ်၍ ဓားစာခံများကိုအောင်မြင်စွာကယ်တင်နိုင်လျှင်၊ သူတို့ကအနိုင်ရရှိပြီးအချိန်ကုန်သွားလျှင်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့သည်အနိုင်ရရှိသည်။
မင်း ဘာလဲ သင်သိလား အဘယ်ကြောင့် CS ၁.၆ အများစုမှာ လူကြိုက်များ ဒေါင်းလုပ် CS ဂိမ်းများ?
CS 1.6 ဗားရှင်း Counter-Strike ဗားရှင်းမှာလူကြိုက်များသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတွင်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအင်္ဂါရပ်များနှင့် attribute များစွာရှိပြီး၎င်းသည် Counter-Strike ဗားရှင်းဟောင်းများထက်ထူးခြား။ ဆွဲဆောင်မှုရှိသည်။ ဒီဗားရှင်း Counter-Strike ကိုပရိုဂရမ်မာများကအထူးသဖြင့်အများပြည်သူအတွက်ကစားသူများ၏စိတ်ဝင်စားမှုနှင့်လိုအပ်ချက်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။ Counter-Strike တွင် multiplayer နှင့် single-player mode များပါ ၀ င်သည်။ developer များအနေဖြင့်ဗျူဟာမြောက်ဒိုင်းများ၊ crosshairs များနှင့် snipers များနှင့် backend updates များစွာကိုဖြစ်ပေါ်စေသောဗားရှင်းအသစ်ကိုထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။
ကစားသမားများတွင်နောက်ဆုံးပေါ် CS 1.6 XNUMX ဗားရှင်းတွင်ဓားများ၊ သေနတ်များ၊ ခန္ဓာကိုယ်သံချပ်ကာများ၊ လက်ပစ်ဗုံးများနှင့်ဗုံးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအပါအဝင်နောက်ဆုံးပေါ်လက်နက်များရှိနိုင်သည်။ ကစားသမားသည်ဂိမ်းကစားခြင်းနှင့်ဂိမ်း၏လိုအပ်ချက်များအရလက်နက်များ ၀ ယ်ခြင်းဖြင့်ငွေရှာနိုင်သည်။ ဤလက်နက်များသည်စစ်မှန်သောတိုက်ခိုက်ရေးအတွက်အသုံးပြုသောအမှန်တကယ်လက်နက်များနှင့်အလွန်ဆင်တူသည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းလက်နက်များသည်ကစားသမားများကိုနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသည်။
Counter-Strike ဗားရှင်းသစ်တွင်အရည်အသွေးမြင့်သောဂရပ်ဖစ်များ၊ ကောင်းမွန်သောမော်ဒယ်လ်၊ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်တက်ကြွသောအသံများပါရှိသည်။ CS 1.6 ၏မြေပုံသည်အခြားမည်သည့်ဗားရှင်းထက်မဆိုအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနိုင်သည်။
ထို့အပြင် Counter-Strike သည်လူအများကြားတွင်ကျော်ကြားလာခဲ့ပြီး၎င်းသည်နေ့စဉ်ဘဝပြproblemsနာများကိုမေ့ပျောက်စေပြီးသူတို့၏ကစားကွင်းအတွင်းရှိမတူကွဲပြားမှုအမျိုးမျိုး၏ဖိစီးမှုအခြေအနေမှဝေးကွာသွားစေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ CS 1.6 ကိုသူငယ်ချင်းများနှင့်သူစိမ်းများနှင့်ဒေါင်းလုပ် လုပ်၍ ကစားခြင်းသည်လူတို့အားအပျက်သဘောအတွေးများကိုကျော်လွှားရန်နှင့်လူတို့အားမိမိကိုယ်ကိုဖော်ပြခြင်းဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုဖျော်ဖြေရန်အခွင့်အလမ်းပေးသည်။ အရည်အသွေးမြင့်ဘာသာပြန်ခြင်းဂိမ်းများနှင့်စကားပြောခြင်းသည်ကစားသမားများအားဒဏ္endာရီလှုပ်ရှားမှုများ၏အင်္ဂါရပ်များကိုခံစားရန်အခွင့်အရေးပေးသည်။
ထို့ကြောင့်၎င်း၏ထူးခြားသောအင်္ဂါရပ်များနှင့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောအင်္ဂါရပ်များကြောင့် CS သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်လူကြိုက်များလာပြီးလူတို့သည်အားလပ်ချိန်၌ဤဂိမ်းကိုနှစ်သက်ကြသည်။ CS 1.6 ကိုအခမဲ့ download ရယူနိုင်ရန်လုံခြုံစိတ်ချရသော link တစ်ခုပေးခြင်းဖြင့်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့ကူညီရန်ကျွန်ုပ်တို့ဤတွင်ရှိနေသည်။